Interview with Dr Su Wit Yee (Founding member of Laser Care Clinic) - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
Interview with Dr Su Wit Yee (Founding member of Laser Care Clinic)
August 6, 2020 | by Laser Care Clinic
ယခုအပတ်မှာတော့ Laser Care Clinic ရဲ့ Founding member Dr Su Wit Yee နဲ့ အင်တာဗျူးကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Dr Su Wit Yee
Interview Date: August 5, 2020
“ အခုနောက်ပိုင်းတော့ PRP သွေးရည်ကြည်ကုထုံး, ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေတဲ့ Carbon Laser Peel, Hollywood Triple Glow နဲ့ အသားရေ ကျစ်လစ်စေတဲ့ Hifu တို့ နာမည်ကြီးပါတယ် ”
အစ်မအကြောင်းလေး အရင်မိတ်ဆက်ပေးပါအုံး ?
အမနာမည်က Dr. Su Wit Yee ပါ... 2013 မှာ M.B.,B.S (YGN)... Aesthetic ပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Diploma in Aesthetic Medicine ကို American Academy of Aesthetic Medicine မှရရှိခဲ့ပြီး MSc. Clinical Dermatology ကိုတော့ King’s College London ကနေ ရရှိခဲ့ပါတယ်... 2013 မှာ Singapore Branch Aesthetic Clinic တစ်ခုမှာAesthetic Doctor အနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး 2014 မှာတော့ Laser Care Clinic မှာ Founding member အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်
Senior အမတစ်ယောက်နဲ့ Aesthetic Training တစ်ခုမှာဆုံတော့ အမကစပြီး သူဆေးခန်းတစ်ခု လုပ်ဖို့ရှိတယ်စိတ်ဝင်စားလားဆိုပြီးပြောပြီး ပါဖြစ်သွားတာပါ 2014 ခုနှစ်မှာ Dhamazedi Branch စဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... Treatment တွေအောင်မြင်ပြီးလူသိများလာတာရယ် clients တောင်းဆိုလာတာရယ်ကြောင့် 2017 မှာတော့Waizayantar Branch ထပ်ဖွင့်ပါတယ်... အမတို့ စုစုပေါင်း Partner4ဦးပါ
ဒီလိုClinic မျိုးလေးဖွင့်နိုင်အောင် အစ်မအနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးလေးကြိုးစားခဲ့ရလဲ ဆိုတာလေး လူငယ်တွေကို Inspire ဖြစ်အောင်ပြောပြပေးလို့ရမလား ? (ပညာရေး၊ အတွေ့အကြုံ ...စသဖြင့်)
အမတို့ စဖွင့်ကာစ Aesthetic Clinic ဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်... Laser Machine တွေရော... သုံးရတဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေရော ဆေးခန်းသုံး skincare products တွေရော ရန်ကုန်မှာ available မဖြစ်ပါဘူး... အမရဲ့Partner အမ Founder Dr. Ei Thinzar Kyaw က တစ်ခုချင်းဆီ ရှာဖွေ ချိတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်... အမ အနေနဲ့ကတော့ အစပိုင်းမှာ Treatment pricing သတ်မှတ်တာတွေ Protocol တွေ ချမှတ်တာတွေ Marketing, Staff Training နဲ့ HR ပိုင်းတွေဖက်မှာ ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်... ပညာရေးပိုင်းဆိုလဲ အမတို့ဆရာဝန်တွေ dermatology & aesthetic နဲ့သတ်ဆိုင်တဲ့ post graduate diploma တွေ master တွေ နိုင်ငံခြားက အရင်ရယူခဲ့ပါတယ်... ဒီAesthetic Treatment တွေကို မျက်ခြေမပြတ်အောင် symposium တွေ training တွေတက်ပြီးဆက်လေ့လာရပါတယ်
အစ်မတို့ Clinic မှာ ရနိုင်တဲ့ Services လေးတွေ တစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါရှင့် ?
ဆေးခန်းမှာ Facial Treatment, Laser Treatment, Injection, Semi-Permanent Tattoo နဲ့ Hair Treatment ပိုင်းတွေရနိုင်ပါတယ်... ခေါင်းအစခြေအဆုံးပေါ့
အမတို့ Korea, Bangkok, Malaysia တို့ဖက်က အဓိကယူပါတယ်... တစ်ချို့ဆေးတွေကတော့ တစ်ဆင့်ယူရပါတယ်... USA made တို့ France made တို့ပါ
ခုနောက်ပိုင်းအလှအပနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခေတ်စားလာတဲ့ အမျှ အမတို့ဆီမှာရော ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုမျိုးက လူသုံးအများဆုံးဖြစ်လာသလဲရှင့် ?
အခုနောက်ပိုင်းတော့ PRP သွေးရည်ကြည်ကုထုံး, ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေတဲ့ Carbon Laser Peel, Hollywood Triple Glow နဲ့ အသားရေ ကျစ်လစ်စေတဲ့ Hifu တို့ နာမည်ကြီးပါတယ်
အများကြီးတော့ ကွာခြားမှုမရှိပါဘူး... Client တွေ တောင်းဆိုမှုအရပဲ အမတို့ ဆေးခန်း ပြန်ဖွင့်လိုက်တာဆိုတော့လေ
အခုနောက်ပိုင်းတော့ Appointment System လေးနဲ့ပဲ သွားတော့ အရမ်း crowded မဖြစ်ဘူး... Client တွေအတွက် safe & secure environment လေးဖြစ်အောင်တော့ တစ်ခါသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ အကုန် စနစ်တကျ လုပ်ပေးထားပါတယ်
အခုလို interview မေးပေးလို့ရယ် Aesthetic clinic တွေကို စုစုစည်းစည်းလေး လုပ်ပေးထားလို့ရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်